यो हो देख्दा मात्र भाग्य चम्किने चन्दननाथको बहुमूल्य दाहिने शङ्ख - NepalTrending
NepalTrending — October 11, 2020 add comment
काठमाडौ । हराएको चार वर्षपछि चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएको एक थान बहुमूल्य दाहीने शङ्ख भेटिएको छ । विसं २०७३ मङ्सिर ११ गते चोरी भएका मूर्तिको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले दाहीने शङ्ख भेटाएको हो । तीन दिन अघि दुई थान मूर्तिसहित पक्राउ परेका तीन आरोपितको सहयोगमा बुधबार चन्दननाथ नगरपालिका १० बोहोरागाउँ जुम्लाको खोलापानेस्थित एक ओडारमुनि राखिएको अवस्थामा दाहिने शङ्ख फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।
किन निधारमा नै लगाईन्छ टिका ? यस्तो छ धार्मिक र बैज्ञानिक कारण
के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? जानीराखौं